Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo boqolaal dadweyne ah kula hadllay Jaamacada magaalada Kismaayo
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh oo maalintii shalay booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ayaa maanta boqolaal dadweyne ah oo u badnaa odayaal dhaqameed iyo ganacsto kula hadllay Jaamacada magaalada Kismaayo oo ah halkii lagu aas aasay maamulka Jubba.
Madaxweyne Xassan Sheekha oo khudbad dheer u jeediyay dadkii uu la kulmay ayaa sheegay in wixii xiligan ka danbeeya dowladdu si rasmi ah uga howlgali doonto magaalada Kismaayo, lana soo gaarsiin doono dhamaanba adeegyadii aas –aasiga ahaa dowladdnimo.
Qaar ka mid ah odayaashii dhaqan ka qeyb-gallay kulanka ayaa ku amaanay madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud booqashada uu ku yimid magaalada Kismaayo iyo waliba dadaalka uu ku doonayo in dadka ku nool gobolladda dalka uu uga dhaadhiciyo siyaasadda dowlada federaalka,islamarkaana uu uga xog wareysto dhibaatooyinka ay qabaan.
Hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe oo ka mid ahaa dadkii ka hadllay kulanka ayaa sheegay in uu rajeynayo shirka ka furmi doona magaalada Muqdisho in lagu soo dhameeyo dhamaan wixii khilaaf ah ee u dhaxeeya dadka wada dega gobollada Jubbooyinka.
Madaxweyne Xassan Sheekh ayaa odayaasha u sheegay in laga bilaabo maanta shirkii Kismaayo uga socday odayaasha dhaqanka Jubbooyinka uu xirran yahay, loona baahan yahay in leysugu tago magaalada Muqdisho, halkaa oo ay taalo gogol nabadeedn oo la doonayo in lagu dhameeyo wixii khilaaf ah ee jira.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa booqashada uu ku tagay magaalada Kismaayo waxaa ay u muuqataa mid uu kalsooni galinayay dadka ku dhaqan magaaladaas, oo u arkayay madaxweynaha shaqsi hal dhinac oo kaliya u shaqeynaya.
Shirka dib-u-hishiisiinta gobollada Jubbooyinka oo lagu wado in maanta galinka danbe uu ka furmo magaalada Muqdisho